Machine Shotcrete, plastering Machine, saar la taaban karo - Keming
Ra'yiga Service: adeegi macaamiisha iyo dhergin macaamiisha
Sida caadiga ah qandaraasle ayaa horey u bixisey oo dhan oo jawaan oo gypsum malaastaan ​​in loo baahan yahay, iyo sidoo kale siin wax kasta oo dibadda oo biyo ah haddii guriga weli ma xiran.
la taaban karo xumbo, sidoo kale loo yaqaan aircrete, la taaban karo ka xumbaynaysa, foamcrete, la taaban karo miisaanka yar gacanta ama hoos u taaban karo cufnaanta, waxaa lagu qeexaa sida slurry cement ku salaysan, iyadoo ugu yaraan 20% (boqolkiiba mugga) xumbo entrained galay malaastiisa oo caag ah.
ruux Enterprise: kaliyeeli, masuuliyadda, hal-abuurnimo, heer sare ah
La asaasay 1979
Machadka Cilmi Baarista Henan Dhuxul Science Keming Farsamada iyo korontada Qalabka Co., Ltd. ku takhasusay cilmi, horumarka, wax soo saarka iyo iibinta xereen iyo listo alaabta iyo badeecada macdanta. Waa ururka ugu horeeya si ay u horumariyaan oo ay soo saaraan ku xereen mashiinka ee Shiinaha iyo haatan waa caadiga ah ee horumarinta warshadaha ee ku xereen ee Shiinaha. unit. Waqtigan xaadirka ah, waxaa ay diyaarisay oo soo saaray noocyada kala duwan ee Keming macdanta brand (engineering) waxyaabaha qalalan iyo qoyan taxane ku xereen, bambooyin extrusion, bambooyin grouting iyo bambooyin kale, in ka badan 50 kala duwan.
aragtida Enterprise: keeni warshadaha mashiinada wax soo saarka ah, waxay noqon shirkadda aad u fiican ku qoran
KBT saar qodan la taaban karo
KH76 tuubada bamka
Henan Dhuxul Science Institute Research Keming Farsamada iyo korontada Qalabka Co., Ltd.?